Qof La Hadal Hayo In Laga Heli Karo Sirta Ururka IS Oo Lagu Qabtay Waqooyiga Siiriya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qof La Hadal Hayo In Laga Heli Karo Sirta Ururka IS Oo...
Qof La Hadal Hayo In Laga Heli Karo Sirta Ururka IS Oo Lagu Qabtay Waqooyiga Siiriya
Ciidamada dalka Turkiga oo howlgal ka fuliyay Waqooyiga dalka Siiriya ayaa gacanta ku soo dhigey haweeney ay walaalo ahaayeen hogaamiyhii khilaafada Islaamka ee la diley Abu bakar Al Baqdadi oo la rumeysan yahay inay hayso sir badan.
Saraakiisha Turkiga waxay sheegeen in haweeneyda oo 65 sano jir ah laguna magacaabaa Rasmiya Awad, waxaana lagu qabtay holwgal ciidan oo isniintii laga fuliyay meel ku dhow magaalada Azaz, xarigeeduna uu fa’iido u noqon karo in la helo sirta qiimaha leh ee ururka IS.
Baqdaadi ayaa is qarxiyay xilli, bishii la soo dhaafay, ay ciidamada gaarka ah ee Mareykanka howlgal ku galeen guri uu degganaa oo ku yaalay Waqooyi-Galbeed ee Suuriya.
Geeridiisa waxaa guulweyn ku tilmaamay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, balse dadka hadalkiisa ka soo horjeeda waxay ku doodayaan in ururka IS uu weli yahay halis amni oo ka tagan Suuriya iyo daafaha caalamka.
Mid ka mid ah saraakiisha Turkiga wuxuu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in xarigga Baqdaadi walaashii ka weyn uu “gacan ka geysan karo in la ogaado shaqada gudaha ee ururka la baxay Khilaafada Islaamka”.
Baqdaadi waxaa la dhalatay shan nin iyo dhowr gabdhood, mana cadda ay dhammaan ay weli nool yihiin, sida uu ku warramay wargeyska The New York Times.
Haweeneyda waxaa laga qabtay gobolka Xalab oo inta badan uu Turkiga maamulo, halkaas oo ay ku qabsadeen howlgal militari oo bishii la soo dhaafay ay sameeyeen ciidamada Turkiga.
Rasmiya Awad waxaa laga helay gaari wayn oo ay ku dhex noolayd. Waxaa la degganaa seygeeda, dumaashideed iyo shan carruur ah, sida saraakiisha Turkiga ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AP.
Waxay tilmaameen in su’alo laga weydiiyay shakiga laga qabo iyada ee ah in ay koox xagjir ah ka mid tahay.
Madaxda Turkiga waxay sheegayaan in Rasmiya ay noqon karto “qof sir badan oo muhiim ah haysa”.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa 27-kii October ku dhawaaqay dhimashada hoggamiyihii ururka la baxay Khilaafada Islaamka.
AL Baqdaadi wuxuu qarxiyay jakad bam oo u xirnayd ka dib markii uu dhex galay kanaal oo uu kaga baxsanayay ciidamada Mareykanka oo weerar ku qaaday gurigiisii ku yaalay gobolka Idlib ee dalka Suuriya, sida uu sheegay Trump.
Previous articleDowlada Federaalka Soomaaliya Oo Diyaarad Shixnad Gargaar Sidday Gaarsiisay Magaalada Baardheere. ‘SAWIRRO’
Next articleWasaaradda Gargaarka oo sheegtay in sidii loogu talo galay ay u socdaal howlaha gurmadka